भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकोबारे ओलीले बोलेको कुरा चर्चामा, त्यस्तो के बोले ?
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकोबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणी चर्चामा आएको छ । ओलीले आफूलाई रावलले चुनौति नदिएको बताएका हुन् ।
मङ्लबार, मंसिर ७, २०७८ ५:२५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकोबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणी चर्चामा आएको छ । ओलीले आफूलाई रावलले चुनौति नदिएको बताएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
मंगलबार महाधिवेशनवारे सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष ओलीले भीम रावलले आफूलाई चुनौति दिएको नभई म आफु उठ्छु भनेर स्नेहपूर्ण सुझावस्वरुप आफूलाई सहयोग गर्न भनेको बताए ।
‘रावलजीले चुनौती दिनुभएको छैन । उहाँले अध्यक्षमा म उठ्छु भन्नुभएको छ र मलाई सहयोग गर्नुस् भन्नु भएको छ । यो स्नेहपूर्ण सुझावबाट प्रभावित भएको छु’, ओलीको भनाइ छ । उनले लोकतन्त्रमा चुनौति दिन पनि पाइने बताए ।
‘मलाई कसैले चुनौति दिए स्वागत गर्छु । लोकतन्त्रमा चुनौति दिन पाइन्छ । म अरुलाई नउठ भनेर दवाव महशुस हुने खालको अभिव्यक्ति दिन्न’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘म उठ्ने नउठ्ने कुनै निर्णय भएको छैन । म उठ्ने भएँ भने अरुलाई कुनै दवाव पनि दिन्न ।’
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीलाई तपाईंले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हो ? भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भने, ‘मैले मन पराएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यो हो जो निर्विरोध हुन्छ या बढी भोट ल्याएर जित्छ । अन्यको हकमा पनि त्यही हुन्छ ।’
यस्तै आगामी शुक्रबार नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चितवनका मुख्य सडकहरूमा गाडी गुडाउन रोक लगाइने भएको छ ।